नवराज सिलवाल, सांसद तथा भूपू डिआइजी यदि शेरबहादुर देउवाको सरकारले ०७३ चैतमा पहिलो वरीयताका डिआइजी नवराज सिलवाललाई आइजिपी बनाइदिएको भए यतिबेला उनी रिटायर्ड लाइफमा हुन्थे । उनलाई ललितपुर क्षेत्र नं. १ को सांसदको हैसियतमा जनताले चिन्ने थिएनन् । तर, संयोगवश उनी आइजिपी बनाइएनन् । सरकार व्यापक आलोचित भयो । त्यसबेलाको प्रतिपक्षी एमालेका लागि सरकारको आलोचना गर्ने महŒवपूर्ण अस्त्र बनिदियो । प्रकारान्तरमा सिलवालले डिआइजीबाटै राजीनामा दिए ।… विस्तृत समाचार
बासु आचार्य, मनोचिकित्सक (साइको थेरापिष्ट) नेपालमा झण्डै ४० लाख मानसिक रोगी रहेको सरकारी तथ्यांक छ । प्रहरीको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो यीमध्ये झण्डै ६ हजार हाराहारीले पछिल्लो आर्थिक बर्षमा आत्महत्याको बाटो रोजेका छन् । बासु आचार्य अहिलेका जल्दाबल्दा ‘साइकोलोजिस्ट’ हुन् । डाक्टर होइनन्, तर दिनभर क्लिनिकमै भेटिन्छ । बिरामी त हेर्छन्, तर औषधि लेख्दैनन् । पछिल्ला ६ बर्षको अवधिमा साइकोथेरापीमार्फत अनौठा–अनौठा मनोरोगीहरुको उपचार गरेका छन्… विस्तृत समाचार
प्रा.डा. चन्द्रमणि अधिकारी, अर्थविद् ०६१ सालमा पूर्वराजाका मान्छेहरुले योजना आयोगको सदस्य बन्न तीन पटकसम्म आग्रह गर्दा अस्वीकार गरेका थिए, चन्द्रमणि अधिकारीले । वाम विचारका उनी नगएपछि अहिलेका अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा तोकिए । उनीचाहिँ ०७१ सालमा वामदेव गौतमको पहलमा योजना आयोगको सदस्य भए । बीचमा विश्व बैंकको पराशर्मदाता, योजना आयोगको वरिष्ठ सल्लाहकार भएर काम गरे । नागरिक लगानी कोषका पूर्वअध्यक्ष उनले लखनउ विश्वविद्यालयबाट कर विषयमा विद्यावारिधि… विस्तृत समाचार
गीता सत्याल, उपमेयर, ललितपुर महानगरपालिका गीता सत्याल उपमेयर ललितपुर महानगरपालिकाकी, जन्मिएकी हुन् काभ्रेमा । महेन्द्ररत्न क्याम्पस ताहाचलबाट स्नातकोत्तर गरेकी उनी संस्कृत विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधीको तयारीमा छिन् । ० न्याय–निसाफको भूमिका उपमेयरको हैसियतले तपाईंले नै निभाउने हो, के छ स्थिति ? – ०७२ को संविधानको धारा २१७ मा स्थानीय तहमा व्यवस्था गरिएअनुरुप ७५३ स्थानीय तहमा न्यायिक समिति छन् । जसमध्ये १८ वटा स्थानीय तहमा मात्र पुरुष उपमेयरको… विस्तृत समाचार
हिरण्यलाल श्रेष्ठ, पूर्वराजदूत/राजनीतिक विश्लेषक नेपालको वाम आन्दोलनमा बौद्धिक क्षेत्रबाट निरन्तर योगदान दिँदै आएका हिरण्यलाल श्रेष्ठले केही समय रुसका लागि राजदूतको रुपमा काम गरे । उनीसँग विदेश मामिलाका थुप्रै ज्ञान र अनुभव छन् । पत्रकारिता पृष्ठभूमि हुँदै तत्कालिन नेकपा (माले), एमालेमा जोडिएका उनी शाहीकालमा राजदूत भएयता पार्टी गतिविधिमा सक्रिय छैनन् । तर, ८४ वर्षको उमेर पार गरिसक्दा पनि वामपन्थी चेतका साथ लेख्ने, बोल्ने काममा सक्रिय छन्… विस्तृत समाचार
गंगा श्रेष्ठ, महासचिव, समाजवादी पार्टी नेपाल अब डा.बाबुराम भट्टराईसँग पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका थोरै सहयात्री बाँकी छन्, जसमध्येका हुन्, गंगा श्रेष्ठ । उनी उपेन्द्र यादव, अशोक राईहरुसँग मिलेर गठित समाजवादी पार्टीका महासचिव हुन् । जनमोर्चा हुँदै माओवादी जनयुद्धमा सक्रिय सिन्धुलीका गंगा बाबुराम प्रधानमन्त्री हुँदा प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार थिए । ० उपेन्द्र यादवसँग पार्टी एकीकरण भएसँगै तपाईंहरुलाई सत्तारुढ भन्ने वा प्रतिपक्षी ? – संविधान संशोधन गर्ने शर्तमा सरकारमा… विस्तृत समाचार